IProtocol yezeNkqubela sele isayiniwe kwiNgqungquthela phakathi kwe-ERÜ kunye ne-Erciyes Aş | RayHaber | raillynews
ikhayaETURKEYUmmandla waseMntla Anatolia38 KayseriIProtocol yoMsebenzi usayiniwe kwiNgqungquthela phakathi kwe-ErÜ kunye ne-Erciyes Aş
21 / 01 / 2020 38 Kayseri, Ummandla waseMntla Anatolia, JIKELELE, ETURKEY, TELPHER
Iprothokholi yemisebenzi yasayinwa kwindibano eyayiphakathi kwe-eru kunye neempazamo njengoko
IYunivesithi yase-Erciyes (i-ERÜ) kunye neKayseri Erciyes A.Ş. Inkqubo yomsebenzi "kwiNgqungquthela" yasayinwa ngenjongo yokwandisa ubuchule babafundi baseyunivesithi kunye nabaphumelele kwizidanga.
IKayseri Erciyes A.Ş. Uhlobo lwe-ERU kumsitho wokutyikitya kwisakhiwo senkonzo. Dr. U-Mustafa Çalış, uSihlalo weBhodi ye-Erciyes AŞ. UMurat Cahid Cıngı kunye nabahlohli babekho.
Ukuthetha kumsitho wokusayina kweprotocol, i-ERÜ Rector. Dr. UMustafa Çalış, “Njengoko uyazi, iYunivesithi yase-Erciyes yunivesithi ejongene nayo yonke ingxaki yesixeko sethu. Xa sasiqala ukwenza ikhompyuter okokuqala, sichaze oku kulandelayo kumnyhadala owawuhanjelwe nguMongameli wethu. Sithe apha ekhampasi siza kuba eyunivesithi, hayi eyunivesithi. Sizama ukukusebenzisa oku kwicandelo ngalinye. Sizama ukuyigcina iphila kwaye sicinga ukuba siyayenza. Namhlanje, siza kusayina enye yazo. Sizingqinele ngokwenyani amasebe kwiYunivesithi yase-Erciyes efana ne-Chinese Literature, Literature yaseKorea, Literature yeLwimi yaseJapan, uNcwadi lweLwimi lwaseRussia kunye noncwadi lwesiNgesi. Sikwanabafundi abaqeqeshiweyo kunye namalungu e-faculty apha. Ngokukodwa kule minyaka yakutshanje, ukhenketho lweentaba e-Erciyes lufikelele kumanqanaba obunzima. Njengeyunivesithi, siya kuba ne-Erciyes AŞ. Ndicinga ukuba iya kubonelela ngexabiso elongeziweyo kubafundi beyunivesithi yethu kunye nexabiso elikhulu elongeziweyo kwi-Erciyes AŞ. Ngokukodwa, abafundi bethu ebebefundisa kwiilwimi zasemzini okanye abo baphumeleleyo, ukuba kunyanzelekile, abafundi bethu baya kuqhuba nezifundo ngakumbi kubakhenkethi bethu abase-Erciyes ngaphakathi kwesakhelo sale nkqubo. I-Erciyes AŞ iya kulungiselela abafundi bethu inxenye yexesha kwaye baphumelele kwindawo yeshishini ngokusisigxina. Ngale ndlela, siza kufaka isandla kukhenketho size negalelo kuphuhliso lwesixeko sethu. ”
UKayseri Erciyes AŞ uSihlalo weBhodi yaBalawuli UMurat Cahid Cıngı uthe, “Namhlanje, njengentsapho yakwa-Erciyes, siqhuba umsebenzi onenjongo. I-Erciyes Ski kunye neZiko lezoKhenketho lifikelele kwinqanaba lezokhenketho elinokubakho kule minyaka idlulileyo ngenkxaso kaMasipala wase-Metropolitan. Ngoku sibamba iindwendwe zangaphandle ezivela kumazwe amaninzi kunye namazwe afana neZizwe eziManyeneyo kwintaba yethu. Ngeenqwelomoya, kufuneka amawaka abahamba ngeenyawo xa besiza e-Erciyes nakwi-ski. Unethuba lokuya eKayseri kwaye ubone imbali yeminyaka engama-6 yempucuko yesixeko sethu. Inika igalelo elibi kwezoqoqosho nakwezenkcubeko kwisixeko sethu. Ke ngoko, ngakumbi kule minyaka idlulileyo, siye sonyusa isidingo sabasebenzi sokuvelisa iinkonzo ezithetha ulwimi lwasemzini. Uyayazi loo nto; Intsebenziswano kumzi-mveliso weDyunivesithi sisihloko ekuthethwa ngaso esingakwaziyo ukufikelela kwimpumelelo esiyinqwenelayo kwilizwe lethu. Ubuncinci, sasifuna ukuvavanya olo phuculo lwezibonelelo kwiyunivesithi yethu kwiZiko leSiza i-Erciyes. Kwiyunivesithi yethu, sinamasebe amaninzi abonelela ngemfundo yolwimi kuzo zombini iFakhalthi yoKhenketho kunye neCandelo lezeNzululwazi kunye neeleta. Ke ngoko, sinxibelelane namasebe sinoluvo lokuba singakwazi ukwanelisa iimfuno zethu apha eyunivesithi. ”
IProtocol yemfundo yokude phakathi kweCandelo le-TCDD Jikelele neYunivesithi yase-Erzincan…
Iprojekthi yokuThuthwa kweProjekthi yoThutho ibhalisiwe phakathi kweTÜBİTAK ne-IETT
Uqeqesho loQeqesho lwasayinwa phakathi kwe-TCDD kunye neProtocol yeMfundo kaZwelonke
Iprotocol yoBambiswano esayinwe phakathi kweTCDD kunye ne-Azerbaijan Railways
Alstom ITU Technical Cooperation Phakathi Turkey and Protocol Isayinwe
I-Samulaş kunye ne-Yeşilyurt Iron kunye ne-Steel Vocational School Isayinwe kwiProgram yoQeqesho lwaBasebenzi
I-ERU campus enevili zerabha ziya kwenza iindandatho
Iprogram yoQeqesho loPhulo lweProjekti
Turkey Payment Common Platform Protocol Isayinwe
I-BTSO kunye ne-ESO Cooperation Protocol yoTyikityo
Iprotocol yoLwazi lweeLwimi lwangaphandle kwiTÜVASAŞ Abasebenzi
Iiprojekti yokuThumela iFreeti yeTyikityo e-Kocaeli
IProtocol yeNdlela yase-Yurasi esayiniweyo
IProtocol yokuBambisana kwe-ORBEL-ODU isayiniwe
Inkqubo yokuKhathalela umsebenzi kwiNgqungquthela
Namhlanje kwimbali: nge-22 kaJanuwari ka-1856 IAlexandria Cairo Linevulelwa ukusebenza